Izindaba - Zithwele ubuciko obuhambisanayo, abaculi basebenzisa intambo yokuthunga kuma-portraits "enetha"
Umdwebi waseSlovenia uSasso Krainz usebenzisa ifreyimu eyindilinga efana nebhandeshi elifekethisiwe ukwenza isithombe esiningiliziwe esakhiwe ngokuphelele ngemigqa eqondile ngentambo eyodwa ejwayelekile yokuthunga.
Uma ubheka kahle, izici zobuso, kufaka phakathi amajika wamehlo nezindebe, konke kwenziwa ngemigqa eqondile ngamazinga ahlukene okugqagqana. Ngokombiko we-website ye-American Strange News, uKrainz uqale wasebenzisa ukhuni noma i-aluminium ukwenza uhlaka oluyisiyingi olumbozwe ngezipikili zensimbi, wabe esesonga lezi zipikili ngentambo ende ende yokuthunga, okwadala amakhulu noma izinkulungwane zazo. Imigqa eqondile, enqamula emigwaqweni nasekugqagqaneni kwemigqa eqondile, ichaza izici eziyinhloko zabalingiswa abasemsebenzini. Kwezinye izingxenye zesithombe, lapho imicu yokuthunga igqagqana khona, ubunzima obunzima bunzima, okuvumela uKrainz ukuthi alawule izithunzi nemininingwane yomsebenzi.
UKrainz usebenze njengomqambi wezithombe, isoftware kanye nonjiniyela wewebhu iminyaka eminingi, ethanda ubuciko obuqondile. Imidwebo yakhe eqondile ifaka phakathi zombili izinkanyezi nabantu bezepolitiki, ababonakala kakhulu. Igalari eyaziwayo eku-inthanethi ethi "Saatchi Art" yabhala esethulweni sayo: "Wayephefumulelwe futhi ephonswa inselelo ngobuciko obulinganayo, futhi ulwela ukudala imisebenzi emihle ngayo yonke imikhakha. Inhloso yakhe ukwakha isithombe esizodlula indlela obukeka ngayo. ” Qiao Ying) [Isici Sezindaba se-Xinhua News Wei Feature]